Nhau - Ailika Inotangisa Iyo Yekushandisa Munda weSolar Power Generation
1. Simba rezuva revashandisi: mashoma masosi esimba kubva pa10-100w anoshandiswa kushandiswa kwesimba kwezuva nezuva munzvimbo dziri kure dzisina magetsi, senzvimbo dzenzvimbo, zvitsuwa, nzvimbo dzevafundisi, miganhu yemuganhu uye humwe hupenyu hwemauto nevevanhu, sekuvhenekesa , TV, redhiyo rekodhi, nezvimwe; 3-5kw yemhuri padenga gridhi-yakabatana magetsi chizvarwa system; Photovoltaic pombi yemvura: yekunwa uye kudiridza kwemvura yakadzika Matsime mumatunhu asina magetsi.
2.Transport: senge mwenje wekufamba, traffic / njanji magetsi emagetsi, yambiro yemigwagwa / mwenje yemasaini, mwenje yemigwagwa, mwenje wepamusoro-kurebesa, maratidziro / njanji matumba emafoni asina waya, nzira yemagetsi inoshandira, nezvimwe.
3.Kutaurirana / yekutaurirana munda: rezuva risingatarisirwe microwave relay chiteshi, optical cable yekuchengetedza chiteshi, kutepfenyura / kutaurirana / paging simba system; Rural inotakura runhare photovoltaic system, diki yekutaurirana muchina, masoja GPS magetsi magetsi.
4. Petroleum, nyanza uye meteorology: cathodic dziviriro yezuva simba sisitimu yemafuta pombi uye gedhi redziva, yekumba uye yechimbichimbi simba rekupa mafuta kuchikuva chikuva, gungwa kuona michina, meteorological / hydrological yekuongorora michina, nezvimwe.
5. Simba remagetsi emarambi epamba: akadai sechivanze chemwenje, mwenje wemugwagwa, mwenje weruoko, mwenje wekudzika musasa, mwenje wekukwira makomo, mwenje wehove, mwenje wevatema, girazi rekucheka gundi, mwenje unoponesa magetsi, nezvimwe.
6. Photovoltaic simba chiteshi: 10kw-50mw yakazvimiririra photovoltaic magetsi chiteshi, mhepo-rezuva (dizeli) inoenderana magetsi chiteshi, akasiyana makuru makuru ekupaka chirimwa kuchaja zviteshi, nezvimwe.
7. Dhizaini yezuva: kusanganisa kugadzira simba rezuva nezvinhu zvekuvaka kuita remangwana rakakura zvivakwa kuwana kuzvigutsa mumagetsi inongedzo huru yekusimudzira mune ramangwana.
8. Mimwe minda inosanganisira: kuenderana nemotokari: zuva mota / mota yemagetsi, bhatiri yekuchaja michina, mota yemhepo kutonhodza, kufefetedza fan, inotonhorera bhokisi, nezvimwe. Renewable simba rekugadzira system yezuva rehydrogen kugadzirwa uye mafuta sero; Magetsi emagetsi emvura yegungwa; Satellites, chitundumusere-musere, nzvimbo dzemagetsi ezuva, nezvimwewo.